"Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra." Efes. 6:12
Ady ny fiainan'ny Kristianina, saingy "isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra." Ny fanampian'Andriamanitra ihany no hahazoantsika fandresena amin'io fifanandrinan'ny fahamarinana sy ny tsy fahamarinana io. Tsy maintsy milefitra amin'ny sitrapon'Ilay tsy misy fetra ny sitrapontsika izay voafetra, tsy maintsy akambana amin'ny an'Andriamanitra ny sitrapon'ny olombelona voafetra. Izany no hahatongavan'ny fanampian'ny Fanahy Masina amintsika, ka ny fandresena tsirairay dia hitodika amin'ny fahazoana indray ny fananan'Andriamanitra izay novidiny, sy ho famerenana indray ny endriny ao am-po.
Niasa tamin'ny alalan'ny Fanahy Masina izay solontenany i Jesôsy. Amin'ny alalan'ny Fanahy Masina no ampitany fiainana ara-panahy ao amin'ny fo, ka manafaingana ny heriny ho amin'ny tsara, manadio izany ho afaka amin'ny fahalotoam-pisainana, ary manome azy ny fahamendrehana ho amin'ny fanjakany. Misy fitahiana manana amby ampy ao amin'i Jesôsy, ary koa fanomezana feno harena hozaraina amin'ny olombelona. Izy no Ilay Mpananatra mahay, manam-pahendrena sy hery tsy misy fetra; koa raha mandray ny herin'ny Fanahiny isika ka manaiky hovolavolainy, dia ho tanteraka ao Aminy. Fisainana ambony manao ahoana loatra re izany ! "Fa ao amin'ny tenany no itoeran'ny fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra; ary hianareo dia tanteraka ao Aminy" - Kôl. 2:9, 10.
Tsy hahita fifaliana mihitsy ny fon'olombelona raha tsy manaiky ny hovolavolain'ny Fanahin'Andriamanitra. Volavolain'ny Fanahy hitovy amin' i Jesôsy Kristy Ilay ohatra ny fo. Eo ambany fitarihany dia hanjary fahatokiana sy fitiavana an'Andriamanitra ny fanoherana, ary ho tonga fanetren-tena ny avonavona. Hahita ny fahatsaran'ny fahamarinana ny fanahy, ka hahazo voninahitra i Kristy amin'ny fahatsarana sy ny fahatanterahan'ny toetra. Rehefa tanteraka ireo fiovana ireo, dia hanao hira fihobiana ny anjely, ary ho faly Andriamanitra sy i Kristy noho ny amin'ireo fanahy voavoatra hanam-pitoviana Aminy."